मोदीको भ्रमणले एमाले-माओवादी सम्बन्धमा चिरा, पार्टी एकता नै धरापमा !
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले फेरि एकपल्ट यहाँको राजनीति तताएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसम्मिलित वामगठबन्धन केही समयअघिसम्म बलियो स्थितिमा थियो तर अहिले त्यसको आधार हल्लिएको छ र लगभग तोडिने स्थितिमा छ । अनि अडिग ‘राष्ट्रवादी’ भनी प्रशंसित नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि मोदी आएपछि धमिलिएको छ ।
मोदीले नेपाल छोडेको केही घन्टाभित्रमा ओली अस्वाभाविक रूपमा क्षमाप्रार्थी देखिए । मोदी भ्रमणका बारेमा जानकारी दिनका लागि संसद्लाई सम्बोधन गरेका ओलीले भ्रमण व्यवस्थापनमा सरकारले गरेका कमजोरीलाई स्वीकारे । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैंभरि तनावग्रस्त रहिरहन सक्दैन भनी जोड दिएपनि ‘नेपालका देशभक्त जनताले सरकारलाई सचेत गराइरहेको जसले गर्दा गल्तीहरू नदोहोरिने’ भनी जनताको प्रशंसा गरे ।
उनले ‘सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीहरूका चिन्तालाई एकदमै गम्भीरताका साथ लिएको’ बताए ।
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रहरूले कसरी सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने उदाहरण दिनका लागि जुनमा हुन लागेको डोनल्ड ट्रम्प र किम जोङ–उनबीचको शिखर सम्मेलनको प्रसंग कोट्ट्याए तर मोदीको भ्रमणले काठमाडौंमा उनको ‘राष्ट्रवादी’ छविमा पुगेको आघात र जन्मेको आक्रोशका बारेमा उनी निश्चितरूपमा चिन्तित भएको देखियो ।
ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले दुई पार्टीको एकता गर्ने अनि नेपालमा सिंगो कम्युनिस्ट खेमा बनाउने प्रतिज्ञाका साथ संयुक्त रूपमा चुनाव लडेका थिए । यो चुनावी प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन र मोदीको भ्रमणपछि यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । पार्टी एकताको लामो र अनिश्चित प्रतीक्षाले दुवै दल तथा मोर्चाका समर्थक र कार्यकर्ताहरूलाई निराश बनाएको छ ।
लेनिनको जन्मोत्सवको अवसर पारेर वैशाख ९ गते मनाइएको कम्युनिस्ट पार्टी गठन दिवसमा दुवै पक्ष एकअर्कासँग झगडा गरिरहेका अनि एकअर्काविरुद्ध नारा लगाइरहेका भेटिए । एमाले कार्यकर्ताहरूले घमण्ड देखाउँदै मञ्चमा लेनिनको तस्वीर नराखेको भन्दै माओवादी केन्द्रका समर्थकहरूले आरोप लगाए । केपी ओलीलाई प्रयोग गरिएजस्तै विशिष्ट शब्दका साथ प्रचण्डलाई स्वागत नगरिएकोमा पनि उनीहरू असन्तुष्ट थिए । आयोजकहरूले केपी ओलीको चित्रसँगै लेनिनको चित्र टाँगेपछि अनि प्रचण्डलाई विस्तारपूर्वक परिचयात्मक स्वागत गरेपछि मात्र कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै ओली र प्रचण्ड दुवैले आफ्ना समर्थकहरूलाई एकता समयका कारण पनि लम्बिएको बताउँदै आएका थिए । पहिला त ओलीको भारत भ्रमणका कारण ढिलाइ भएको भनियो । अनि मोदीले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि नै एकता गर्ने भनी समाचार आए । एक महिनाअघि ओली र प्रचण्डले सात बुँदे एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एकतासँग सम्बन्धित विवाद मिलाउनका लागि शीर्ष नेताहरूको एक टोली बनाए । तर त्यसपछि उत्साह सेलाउँदै गएको छ र नाम नबताउने शर्तमा माओवादीका एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भनेझैं एकता अब एजेन्डा नै रहेन र उनीहरूले बैठकहरूमा यसको चर्चा समेत गर्न छोडेका छन् ।
मोदीले बढाए विभाजन
मोदी जनकपुरमा अवतरण गर्नेबित्तिकै दुई पार्टीबीचको सम्बन्धमा चिरा देखिन थाल्यो । मोदीको भ्रमणअवधिभर प्रचण्डले ‘लो प्रोफाइल’ राखे अनि उनका दलका मन्त्रीहरू राज्यले आयोजना गरेका सबै कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा भाग लिएनन् ।
उनका सहयोगीले पुनलाई कार्यक्रममा ननिम्त्याइएको गुनासो गरे । पछि माओवादी नेताहरूले मोदीलाई काठमाडौंमा गरिएको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम बहिष्कार गरे । गठबन्धन साझेदार माओवादी केन्द्रले सिफारिश गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई ओलीले अस्वीकार गरिदिएको खबर छ । उनले प्रचण्डका सुझावहरू पनि बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्ड गठबन्धनबाट बाहिरिएलान् ?
एमालेको शीर्ष नेतृत्व प्रचण्डको नेतृत्वका बारेमा सुनिश्चित छैन भन्ने अब लगभग प्रस्ट भइसकेको छ । सन् १९९० को दशकमा गठन भएको एमालेले प्रचण्ड र उनको दललाई शत्रुका रूपमा लिन्छ । सशस्त्र युद्धका बेलामा माओवादी क्याडरहरूले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने गरेका थिए । अचम्मको कुरा त, एमालेको पार्टी वेबसाइटमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मारेका एमालेका ४९० क्याडरका नामको एक लिंक छ । उक्त लिंकको पेजमा लेखिएको छ : ‘पार्टीले राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था वा राजतन्त्रविरुद्ध गरेको संघर्षमा मारिएका कार्यकर्ताभन्दा द्वन्द्वका बेलामा मारिएका कार्यकर्ताको संख्या बढी छ ।’
त्यसैगरी माओवादी नेताहरू पनि एकताका विषयमा बढी नै चिन्तित हुन थालेका छन् । आफ्ना नेताहरूलाई किनारीकृत गरिएकोलाई उनीहरू भविष्यका लागि चेतावनीका रूपमा हेरिरहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका केन्द्रीय समिति सदस्यका अनुसार, योङ कम्युनिस्ट लीग र पार्टीका अधिकांश बुद्धिजीवी तथा परराष्ट्र विभाग एकताको विपक्षमा छन् । तर उनका अनुसार, यस विषयमा प्रचण्डकै बोली अन्तिम हुनेछ ।
प्रचण्डको मनमा के चलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट छैन तर उनी ओलीलाई आफ्नो पार्टीमा कुरा मिलाउनका लागि थप समय दिन तयार रहेको देखिन्छन् । ओली र प्रचण्ड दुवै महत्त्वाकांक्षी छन् र दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता छ । तर दुवैले एकतामा ढिलाइ भएमा दुवैजना कहीँ पनि पुग्दैनन् भनी दिमागमा राख्नु जरूरी छ ।
एकतालाई गति दिइएन भने त्यसले विभाजनलाई तीव्रता दिन्छ । अनि ओलीका लागि ठूलो पाठ हो – अरेबियन नाइट्सको कथाको जिन जस्तो राष्ट्रियताको मुद्दा उचाल्न सजिलो तर नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ ।
(डेलीओ डट् इनमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद)
दिल्लीस्थित पत्रकार शर्मा नेपाल मामिलामा नियमित लेख्छन् ।